अभिनेत्री प्रकृति ६ वर्षपछि फिल्म ‘बिहे पास’ बाट अभिनयमा फर्किदै - City Post Daily
June 26, 2021 मनोरञ्जन
काठमाडौँ, १२ असार । अभिनेत्री प्रकृति श्रेष्ठ ६ वर्षपछि फिल्म ‘बिहे पास’ बाट अभिनयमा फर्किएकी छन् । एक समय म्यूजिक भिडियोमा निकै जमेको जोडी हो– पल शाह र प्रकृति श्रेष्ठ । उनीहरुले एकसाथ कयौं म्यूजिक भिडियोमा काम गरेका छन् । ‘आई लभ यू, पूर्णिमाको चन्द्रमालाई, तिम्रो चन्चले रुपले, को होला त्यो ?’ लगायतका गीतमा यो जोडीको केमेस्ट्री खुब रुचाइएको थियो । तर, प्रकृति विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि भने उनीहरुको म्यूजिक भिडियोमा सहकार्य हुन सकेको थिएन ।
विवाहपछि श्रीमानसँग अष्ट्रेलियामा बस्दै आएकी उनले ‘होस्टेल’ बाट अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गरेकी थिइन् । यो फिल्म हिट भए पनि उनले सफलताको क्रेडिट पाइनन् । यद्यपि, उनको सुन्दरता र अभिनयको भने निकै प्रशंसा भएको थियो । दोस्रो फिल्मको रुपमा ‘उत्सव’ मा काम गरेपछि उनी बैबाहिक जीवनमा बाँधिइन् । यसपछि उनले अभिनयलाई निरन्तरता दिन पाएका थिइनन् ।
प्रकृतिले फिल्ममा राम्रो काम पाइरहँदा पलले भने फिल्ममा ब्रेक पाउन सकेका थिएनन् । तर, अहिले उनी नेपाली फिल्मका ‘स्टार’ बनिसकेका छन् । निषेधाज्ञाभन्दा अगाडि पल र प्रकृतिले ‘को होला त्यो ?’ गीतको फिमेल भर्सनमा एकसाथ अभिनय पनि गरे, जुन मंगलवार यूट्युबमा सार्वजनिक भएको छ ।
यो जोडीलाई दर्शकले अझै कति मन पराउँछन् भन्ने कुरा उक्त गीतले यूट्युबमा पाएको आक्रामक भ्यूजबाट बुझ्न सकिन्छ । तर, कयौं म्यूजिक भिडियोमा सँगै काम गरेका उनीहरुको फिल्ममा भने जोडी बाँधिएको छैन । जसले गर्दा पल र प्रकृतिलाई फिल्ममा हेर्ने दर्शकको ठूलो इच्छा छ । यसका लागि उनीहरु पनि तयार छन् । अब निर्माता÷निर्देशक पनि तयार होलान् कि ? प्रतिक्षा गरौं ।
यसैगरी, अभिनेत्री तथा मोडल निशा घिमिरेको स्वास्थ्यमा क्रमिक रुपमा सुधार हुँदै गएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरुले बताएका छन् । सवारी दुर्घटनामा परेर तीन वर्षदेखि अर्धचेत अवस्थामा रहेकी उनको नर्भिक अस्पतालकी प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरीले जेठ २७ गते उद्धार गरेर उपचार सुरु गरेकी थिइन् । हाल नर्भिक अस्पतालले उनलाई विशेष उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिरहेको छ ।
अस्पताल भर्ना भएको भोलीपल्टदेखि नै उनको मुहारमा खुसीको चमक देखिएको थियो । उपचारपछि उनको शरीरका घाउहरु निको हुन थालेको अस्पतालले जनाएको छ । डा. पंकज जलान नेतृत्वको टिमले ह्विलचेयर थेरापी, म्युजिक थेरापी लगायतका विधिबाट उनको उपचार गरिरहेको छ । चिकित्सकका अनुसार, उनले केही दिनदेखि बोल्ने कोशिश समेत गरिरहेकी छन् ।
डा. जलानले भोक लाग्दा निशाले संकेत दिन थालेको र आफूहरुले बोलेका कुरा बुझेजस्तो गरी अनुहार र आँखाको हाउभाउबाट प्रतिक्रिया समेत दिने गरेको बताए । ब्रेन निकै ड्यामेज भइसकेका कारण निशा पहिलेको जस्तै सामान्य अवस्थामा फर्किने सम्भावना भने न्यून रहेको उनको भनाई छ । मंगलवारबाट चिकित्सकले उनलाई ह्वीलचेयरमा बसाउन समेत सुरु गरेका छन् ।
तीन वर्षअघि अभिनयको कोर्स पढ्न भन्दै उनी भारत गएकी थिइन् । त्यहाँ भएको सवारी दुर्घटनामा परेर गम्भीर घाइते भएकी उनको लामो समय भारतमै उपचार भएको थियो । तर, अस्पतालको महंगो खर्च धान्न नसक्ने भएपछि उनको परिवारले उनलाई एम्बुलेन्समार्फत् नेपाल ल्याएका थिए । निशाले एक नेपाली फिल्मसँगै तीन दर्जनभन्दा बढी म्यूजिक भिडियोमा काम गरेकी छन् ।